Ukuqala iphrojekthi ngeGit neGoogle Code (Ingxenye I) | Kusuka kuLinux
Ukuqala iphrojekthi ngeGit neGoogle Code (Ingxenye I)
leo | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Kade ngilandela ibhulogi isikhashana futhi bengifuna ukuhlanganyela okuthile nawe isikhashana. Ngenhlanhla manje nginesikhathi esithile futhi nginqume ukuhlanganisa okokufundisa okuncane kokuthi ungakha kanjani iphrojekthi I-Git bese uyilayisha ku- I-Google Code.
Izifundiswa eziningi ziqala ngokuhlanganisa ikhosombe (ukulilanda kusuka kuseva ekude njenge I-Google Code, GitHub, bitbucket , njll ...), kepha bambalwa kakhulu ababheka onjiniyela abaqala okuthile futhi abafuna ukwenza leyo phrojekthi besebenzisa uhlelo lokulawula inguqulo (CVS, Uhlelo Lokuhumusha Oluhambisanayo) uthanda I-Git.
Ukuze ufunde kabanzi ngokulawulwa kwenguqulo ungabona lezi zihloko ku-Wikipedia: Ukulawulwa kwenguqulo y CVS.
Ukuqaliswa kohlelo lokulawula inguqulo lokuthuthuka kwesoftware kukuvumela ukuthi ugweme izimo ezifana nalezi esizibona ku- Isithombe se-1 (Angikungabazi ukuthi kwenzeke ngaphezu koyedwa wethu).
Ngakolunye uhlangothi, uma silwazi lolu hlelo singalukhulisa ukuze silusebenzise kwezinye izinhlelo zokusebenza. Isibonelo, ingasetshenziselwa ukulawula inguqulo yamadokhumenti esivame ukuwahlela. Lokhu kusivumela ukuthi sigcine umlando ogciniwe womsebenzi owenziwayo kanye nokufezeka kwamagatsha ahlukene angaba yiminikelo evela kubahlanganyeli abahlukahlukene.
1 Kungani iGit?
2 Kungani ku-Google Code?
Yebo, ikakhulukazi ngoba kungenye yezinto ezinhle kakhulu laphaya. Yenziwe ngumngane wethu othandekayo Linus Torvalds ku-C ngo-2005 futhi yiyona esetshenziselwa ukulandela umkhondo wezinguqulo ze-Linux kernel (akukubi, akunjalo?).
Kulula ukuyisebenzisa futhi ngokusho kocwaningo olwenziwe ngo-2013 oluthi hamba kahle, abasebenzisi be-Eclipse IDE bathola ama-30%.
Ngeminye imininingwane ungathinta indatshana ye- I-Wikipedia (ngesiNgisi) cishe I-Git, noma ngqo ngokusebenzisa i- iwebhusayithi esemthethweni
Esizeni esisemthethweni singathola yonke imibhalo efanele, incwadi ehlanganisa izici ezibaluleke kakhulu ze- I-Git ukucwaninga kancane ukuthi sizobona ini kule ndatshana.
Ngenhlanhla sinayo eyodwa Inguqulo yesi-Spanish elihunyushwe kahle futhi liphelele impela. Ukuhumusha ku GitHub futhi ungafaka isandla ekuyithuthukiseni.
Kungani ku-Google Code?
Yebo, akukho okuningi ongakusho ngalesi sikhondlakhondla se-Intanethi ... Noma kunezinketho eziningi zokubamba amaphrojekthi, iningi lethu selivele line-akhawunti -Google ngakho-ke usunayo igama lakho lomsebenzisi I-Google Code, okwenza izinto zibe lula.
Futhi I-Google Code Iphatha amaphrojekthi amakhulu ngezilimi ezahlukahlukene, imahhala, yenzelwe kuphela ukusetshenziswa kwamaphrojekthi we-Open Source futhi kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Ngakolunye uhlangothi, bekufanele ukhethe okukodwa kokukhethwa kukho okuningi futhi ngivele ngacabanga ukuthi ngizozama lokho i-web giant esikunikeza khona. Kuzitolimende ezizayo ngizobe ngibuyekeza okunye okunikezwayo okukhona.
Kuze kube manje isingeniso esifushane futhi kwisitolimende esilandelayo sizobuyekeza ukuthi singayakha kanjani iphrojekthi yethu ku I-Google Code.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ukuqala iphrojekthi ngeGit neGoogle Code (Ingxenye I)
Yebo, iGoogle Code iyangibulala (futhi ngifinyelela amaphrojekthi eyisingathile) ngoba ivinjelwe izwe lami (Cuba), ngisebenzisa iGithub ngokuphelele, futhi yize ngikwazi ukufinyelela kuGoogle Code, angiboni iphuzu lokusebenzisa enye into ngaphandle kweGithub, kalula yibo abahamba phambili.
Yebo, bakhuluma kakhulu ngeNkululeko kuwebhu futhi basivimbele.
I-NSA isebenzisa i-ICANN ukusongela iGoogle, i-United States ingavala ikhasi elifunayo. Uma i-Google ivula izinsizakalo zayo eCuba, i-ICANN izovala isizinda (i-Google engeke isithande). Ingabe othile wathi VPN? ^ _ ^
Kulapho eCuba. ukwabiwa komkhawulokudonsa akulingani, ngakho-ke i-VPN ingukunethezeka lapho.
Nazi ezishibhile: http://www.vpnbook.com/freevpn ($ 0 ukuba ngqo)
Omunye umehluko owokuthi ku-github ezinye izinkampani ziyisebenzisela ukucinga amathalente azo amasha, okuyinto engenzeki ngekhodi ye-google. Ngakolunye uhlangothi, uma iGoogle uqobo idlulisa amanye amaphrojekthi wayo we-Opensource ku-GitHub, awucabangi ukuthi yenzelwe okuthile?… Sanibonani nonke.
Ikhodi ye-Google ilusizo kakhulu, ngiyisebenzisela imisebenzi yaseyunivesithi kepha angisebenzisi iGit kepha i-Subversion, ngisebenzisa i-svn ngoba yimi engisazi kahle
Emuva ngosuku lokhu kufundiswa kwe-git kunconyelwe kimi.
Ngikuthole kuhle kakhulu.
Uma ngingakhumbuli kabi, i-Google Code ibivele imboza okuqukethwe okuhleleke, okulandwayo nokunye okunjalo izinyanga. Angiyisebenzisi ngakho-ke anginayo imininingwane yayo, kodwa ngicabanga ukuthi kuzoba yinto enizoxoxa ngayo ngokujulile ngoba ngoJanuwari 2014 babenezinguquko ezithile ezilinganiselwe. Futhi ngiyi-pro Google XD
Iqiniso ukuthi bengingazi ngemikhawulo yeGoogle Code, kuvele kwabonakala kuyinto elula ukuqala ngaphandle kokudala i-akhawunti entsha (ngoba abaningi kumele babe ne-akhawunti yakwaGoogle).
Kwakuyindlela engangizama ngayo, yayilusizo kimi futhi ngabelana ngayo. Impela kunezinye izinketho eziningi ezingcono, kepha konke kuya ngokuthi imvelo yomsebenzi ngayinye injani.
Kuzofanele sibone ukuthi iGoogle isisibekele ini ngo-2014, ngiyazi ukuthi balungiselela isiza esisha sokubeka phambili imisebenzi yonjiniyela.
Ngenhlanhla angamathuluzi ayi-2.0, lapho ethatha inqubomgomo engagculisi umsebenzisi, umuntu umane ayeke ukuyisebenzisa futhi ayi-voila! Vele, kufanele ukukucabangele njalo lokho, ngoba kungenzeka ukuthi kuphele ukuba khona ngaphandle kokufiswa umuntu ...
Ukwazi izinqolobane ze-APT nezobuntu